China SHL Bulk Industrial Boiler emeputa na Ndi | Ugboro abụọ Mgbaaka
Usoro nke SHL Boiler bụ nnukwu ụlọ ọrụ na-anya mmiri nwere obere ụgbọ mmiri na-anya ụgbọ mmiri na transverse haziri, yana eke igwe na-agba mmiri anwụrụ ọkụ anwụrụ ọkụ.
Otutu usoro ji esi mmiri ọkụ
NTRihi na NSOGBU NA-EZIN OFLỌ SHL BOILERS:
Usoro nke SHL ji esi mmiri ọkụ bụ nnukwu ulo oru esi mmiri ọkụ na sọrọ ji esi mmiri ọkụ cylinders na transverse ndokwa, nakwa dị ka eke ịgba ígwè coal combustion mmiri anwụrụ ji esi mmiri ọkụ. The transverse elu na ala ụgbọ elu cylinders na mmiri jụrụ anwụrụ mgbidi ọnụ na-etolite na silo ụdị oku, ya na convection ọkpọkọ na obi mkpokọta na-etolite ahụ esi mmiri ọkụ.Atinye akụkụ azụ, e nwere unyi nchekwa ikuku tupu kpo oku; na
Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ị nwere ịtọlite ​​nnukwu ụlọ ọkụ dị n'okirikiri. Ngwa ngwa ọkụ na - eme squama grating, njikwa oge n'efu. Shoplọ ahịa pụọ ​​na ụdị nnukwu maka nzukọ ebe a na-ewu saịtị. Na smog eruo bụ ụdị nke multi-backhaul
Typedị igwe mmiri a nwere njirimara ndị a: nke nwere ike karịrị ọrụ. ngwa ngwa na ịrị elu nke okpomoku, elu na arụmọrụ okpomoku, ịbelata ala; uhi-free squama ji kpachie oghere na-eme ka ukwuu enwekwukwa ntụkwasị obi na arụmọrụ. Kwesịrị ekwesị maka nnukwu iche ọkụ ọkụ na mgbidi nwere ike wuru ya, ọ dị mma na-egbochi ịrụ ọrụ. Kedu nke megidere ọnọdụ mgbanye, nchebe gburugburu na ịchekwa ike, dị egwu
ọkụ, ọnọdụ dị elu na akpaaka, kwụsie ike na sate arụmọrụ ma bụrụkwa ntụkwasị obi, ya na ndụ ogologo ọrụ.
Bodị a na-ere mmiri nwere oke arụmọrụ zuru oke, arụmọrụ dị elu nke ikuku, mmeghachi ike siri ike na kol, nsị NOx dị ala, nchekwa na ntụkwasị obi, mgbochi anwụrụ ọkụ yana njikwa uzu. A na-ejikarị kpo oku etiti na ndụ ndị mmadụ.
Nke gara aga: DHL Corner Tube Bulk Water Pipe Boiler
Osote: SHX ekesa Fluidized ndina ji esi mmiri ọkụ
nnukwu igwe mmiri
shl ụdị ụlọ ọrụ ọkụ ọkụ